Muranka Biyeed Ee U Dhaxeeya Ethiopia Iyo Masar Oo Meeshii Ugu Sarreysay Gaaray Iyo Xiisad Cusub Oo Soo Cusboonaatay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Muranka Biyeed Ee U Dhaxeeya Ethiopia Iyo Masar Oo Meeshii Ugu Sarreysay...
Muranka Biyeed Ee U Dhaxeeya Ethiopia Iyo Masar Oo Meeshii Ugu Sarreysay Gaaray Iyo Xiisad Cusub Oo Soo Cusboonaatay
War rasmi ah oo kasoo baxay hoggaanka dalka Masar ayaa looga digay mashruuca biya xireenka wabiga Niil ee dowladda Itoobiya ay ku howlaneed 6-dii sanadood ee lasoo dhaafay.
Madaxda dalka Masar ayaa dowladda Itoobiya uga digay in ay leexiso biyaha wabiga taas oo Oon iyo harraad usoo jiidi karta shacabka Masar “Cidna ma awooddo in ay farageliso xisada Masar ay ku leedahay biyaha wabiga Niil, arrintaas waa Nolol ama geeri” ayuu yiri Alsiisi.
Cabdi Fataax alsiisi oo ah madaxweynaha Masar ayaa sheegay in lama taabtaan ay tahay qeybta Masar ay ku leedahay biyaha wabiga Niil, Alsiisi oo kalimad ka jeediyay munaasabad ka dhacday gobolka Kafra sheekh ee gudaha Masar ayaa sheegay in arrinta ay tahay Nolol ama geeri oo macnaheedu yahay in malaayiinta shacabka ah ee Masar kunool aysan noolaan karin wabiga Niil la’aantiis.
“Sow weli kama hadlaysaan arintii biya xireenka “Annahda”, oo ma islihidiin toloow waa sidee xaalka biyaha Masar. Ogaada in biyaha Masar wax hadal ah uusan ka furnayn, waxaan idinkugu bishaaraynayaa inaysan jirin cid soo faragelin karta biyaha Masar”ayuu yiri Siisi.
R/wasaaraha dowladda Itoobiya oo maalmo ka hor booqasho ku tagay magaalada Dooxa ee wadanka Qadar ayaa la sheegay in uu Maalgelin hor leh ka codsaday qadar si soo dadajiyo dhismaha biyaha xireenka biyaha wabiga Niil oo Itoobiya ay doonayso in ay kasoo saarto koronto ay ka iibin doonto dhowr wadan oo dhaca bartamaha iyo bariga qaaradda Afrika.
“Saddex qodob ayaan ugu horeyntiiba kala hadalnay walaaleheen Suudaan iyo Itoobiya. Waxaa kamid ahaa qodob quseeya in aysan faraha lasoo gelin biyaha, waxaan u sheegnay inaan fahansanahay muhiimada barnaamijtooda horumarinta ah ee ay wadaan, balse barnaamijtooda horumarineed waxaa nooga muhiimsan biyaha oo aan inaga horumarin noo ahayn balse ah nolol ama geeri shacab idil. Biyuhu waa wax Ilaahay abuuray oo aanay cidna sheegan karin, soona jiray kumanaan sano” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Cabdi Fataax Alsiisi.
Sanaddii 2012 ayuu R/wasaarihii hore ee Itoobiya Males Zenawi xariga ka jaray dhismaha Biya xireenka Alnahda oo haddii dhismihiisa la dhameystiro noqanaya biya xireenka 10-aad ee adduunka ugu weyn iyo biya xireenka ugu weyn qaaradda Afrika.